gPodder: Mpanangona media tsotra sy mpanjifa podcast ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
gPodder: Mpanangona media tsotra sy mpanjifa podcast ho an'ny Linux
Hatramin'izao, lamaody be izao ny mampiasa ny Podcasts, tsy ho an'ny sahan'ny fanaparitahana, fianarana ary fampianarana avy amin'ny sahan'ny Rindrambaiko maimaim-poana, loharano misokatra ary GNU / Linux, fa ho an'ny karazana sehatra, atiny ary tanjona rehetra, anio no horesahintsika «gPodder ».
«gPodder » dia fitaovana kely, nefa tena ilaina rindrambaiko novolavolaina tao Python miaraka amin'ny GTK +, izay miasa ho tsotra mpanangona media sy mpanjifa podcast ho an'ny Linux, izany hoe mamela antsika misintona sy mihaino fantsona podcast marobe amin'ny fomba tsotra sy haingana.
Goodvibe: fampiharana tsara handrenesana feo avy amin'ny Internet
Alohan'ny hanombohako mamaritra «gPodder »Toy ny mahazatra dia mamporisika anao izahay aorian'ny famakiana ity famoahana ity dia tsidiho ny famoahana anay teo aloha mifandraika amin'ny lohahevitr'ireo fampiharana ilaina mba hihainoana Podcast amin'ny Linux, izay momba Goodvibe», izay faritanay amin'ny fotoana mety toy izao manaraka izao:
"Goodvibes dia mpilalao radio Internet maivana ho an'ny GNU / Linux. Ao anatiny no ahafahanao mitahiry ireo gara tianao amin'ny fametrahana azy fotsiny, dia izay ihany. Ny rindranasa dia tsy manana anjara asany hikarohana onjam-peo, tsy maintsy miditra ao anaty ny URL misy ilay audio ianao. Tsy dia mora ampiasaina ny fantatro, fa ny manao tsara kokoa noho izany dia tsy mora".
Na izany aza, na eo aza ny fangatahana fihainoana Radio amin'ny Internet, miaraka amin'ny fika kely nofaritana tao amin'ity lahatsoratra ity, afaka mihaino amin'ny Internet ny fantsona sasany an'ny Podcast.
1 gPodder: Mpanangona media sy mpanjifa podcast
1.1 Fampahalalana mahasoa momba ny gPodder
1.2 Inona no vaovao amin'ny kinova 3.10.17
1.3 Fametrahana sy Screenshot
gPodder: Mpanangona media sy mpanjifa podcast
Fampahalalana mahasoa momba ny gPodder
Araka ny anao tranokala ofisialy, amin'izao «gPodder » mandeha ho an'ny kinova 3.10.17. Ity sy ireo kinova taloha dia azo zahana amin'ny fipihana eo ambany rohy. Amin'ny ankapobeny, dia a Mpanjifa Desktop Linux ahafahantsika mitantana (misintona sy mihaino) ireo ankafizinay fantsona podcast amin'ny alàlan'ny interface tsotra, nefa feno fiasa, toy ny manampy / manitsy / mamafa / mitady ary / na manafatra / manondrana podcast. Izy io koa dia manana fampidirana mahatalanjona amin'ireo tranonkala «Soundcloud (soundcloud.com)» y «GPodder (gpodder.net)».
Inona no vaovao amin'ny kinova 3.10.17
Anisan'ireo fiasa vaovao (fanamboarana sy fanatsarana) maro tafiditra ao anatin'ity famoahana maharitra farany ity, ampidiro ireto manaraka ireto:
YouTube-DL reset reset.
Fanitsiana ireo lesoka tamin'ny fanavaozana ireo mpanangona loharano (feed), izay mampandeha fampandrenesana tokana fotsiny izao. Izay hita amin'ny alàlan'ny kisary fampitandremana eo akaikin'ny lohatenin'izy ireo.
Fanavaozana ny fanohanana marobe amin'ny fiteny sinoa, rosiana, portogey breziliana, alemanina, sns. Ny interface-ny dia tsy nadika manontolo ho amin'ny teny Espaniola, fa amin'ny lafiny lehibe.
Azo alaina ho an'ny Linux, MacOS, ary Windows.
Fametrahana sy Screenshot
Amin'ny tranga manokana, nametraka gPodder aho tamin'ny alàlan'ny fampiasana FlatHub, momba ahy MX Linux Personal Respin (MilagrOS), izay ilainao fotsiny ny fampiharana ireto baiko manaraka ireto:
Mihazakazaka avy eo ary ampiasao amin'ny alàlan'ny Menu ho an'ny fampiharana. Toa ny aseho amin'ny sary etsy ambany io:
naoty: Amiko manokana, avy amin'ny «gPodder » Tena tiako ilay fahefana ampio ny URL an'ny Channel YouTube ary hahafahana misintona azy ireo tsy misy olana. Ho fanampin'izany, mamela antsika hahazo mora foana ny URL an'ny fahan'izy ireo, hampiditra azy ireo, ohatra, ny fahana amin'ny tranokala. Ary tsy tiako, ilay tsy mitondra installer fisie «.deb, .rpm o .AppImage», na dia somary manampy aza ny fisian'ny LaunchPad. Mety misy safidy mandroso kokoa Podgrab.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «gPodder», izay fitaovana rindrambaiko kely, nefa tena ilaina dia novolavolaina tao amin'ny Python miaraka amin'ny GTK +, izay miasa ho tsotra mpanangona media sy mpanjifa podcast ho an'ny Linux; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » gPodder: Mpanangona media tsotra sy mpanjifa podcast ho an'ny Linux
Ny Raspberry Pi Foundation dia nametraka mangingina tranombarotra Microsoft
Kobalos, malware iray mangalatra mari-pahaizana SSH amin'ny Linux, BSD ary Solaris